Ziziphi iingenelo zokusebenzisa i-backlink booster?
Ukuba ungathanda ukuqhuba umhlaba weemarike zedijithali, kufuneka uhlale usesikhathini kwaye uqhubeke. Ukufumana iithayibhile ezijoliswe kumaphepha akho kwaye ubeke kwiindawo eziphezulu kwiinkqubo zokukhangela, kufuneka ube nesicwangciso esilungisiweyo sokuthengisa kunye nolwazi olukhethekileyo kwi-sphere ye-optimisation. Nangona kunjalo, inkqubo yokuphunyezwa idinga ixesha elininzi kunye nemizamo. Yingakho abaninzi be-webmasters kunye nabanikazi bewebhusayithi bathetha ukusebenzisa iindlela ezingekho mthethweni ze-spammy ukuphucula ijusi yesikhonkco. Ezi ndlela ezikhohlisayo ezingahambisani nezikhokelo ze-Google zizisa impendulo engalunganga kwisayithi. Ngenxa yoko, iwebhusayithi yakho inokufumana ukuxhamla kwe-Google, ukususa oko kungayinkqubo echitha ixesha.
Akunabo bonke abanikazi bewebhu abanokukwazi ukudala ikampu yokwakha ikhonkco ngokuphumelela ngenxa yokungabi nalwazi, ixesha okanye amava. Ngaphezu koko, akubona bonke abakwaziyo ukulungiselela inkonzo ye-SEO yexabiso elingabizi. Nangona kunjalo, kwimihla yethu, ngaphandle kwephulo elifanelekileyo lokuthengisa kunye nephulo lokukhuthaza, nayiphina iwebhusayithi ayikwazi ukuxhasa ukhuphiswano. Okuthiwa yi-backlink booster ingaba yinto engcono kubantu abafuna ukufumana umphumo omuhle ngexesha elifutshane.
Yiyiphi imiphumo oyifumanayo kwisakhiwo sekhonkco?
Unxibelelwano lwenkqubo yokwakha idlala entliziyweni yokukhangela injini yokukhangela. Isebenza njengeqhinga lokukhuthaza inzuzo kwiintsuku zethu kwaye ivelise iziphumo ezibonakalayo kubaphathi bewebhusayithi. Eli qhinga lokuzalisa i-Intanethi ngolwazi malunga nomthombo wewebhu. Njengomphumo wendlela ehlakaniphile yokuvelisa izixhumanisi zangaphandle, umthombo wewebhu unokufumana ulungelelwano olufanelekileyo, isigaba esiphakamileyo kwiphepha lekhasi lokukhangela, ukuhamba kwendlela yokuqhuba ukuguqulwa, ukuphuculwa kokwaziswa komnxeba, idumela elihle kwizibalo zeGoogle kunye nomfanekiso ochanekileyo wenkampani. abathengi bamanje kunye nabathengi.
Nangona kunjalo, ukuba unendlela engenzi nzuzo kwisicwangciso sakho sokwakha isixhumanisi, unomngcipheko wokufumana izigwebo ezivela "kwizilwanyana" zeGoogle (i-Panda, i-Penguin, i-Hummingbird filters). Indlela yobugcisa kufuneka ibe lula kwaye ihambelane kakhulu kwaye yenzelwe ngokwemiqathango yeGoogle. Ukuba unomtsha kwi-optimization sphere kwaye ungazi indlela yokwenza i-backlink ipiramidi, unokuphumeza i-software ekhethekileyo, okanye ufumane iinkonzo zobungcali.
I-Backlink Booster kunye ne-14 (Semalt Auto SEO yomsebenzi
Ukuba uvakalelwa ukungabi nolwazi nolwazi kwizakhiwo zokuqhagamshelana, kufuneka ufunde. Olu luncedo alufanele lube neendleko ezininzi. Inokuhlawuleka okanye ikhululekile. Ngokomzekelo, kwi-software ye-backlink bosterster akufanele uhlawule nayiphina. Yonke into oyifunayo kukufakela inkqubo kwaye ungeze umthombo wakho wewebhu kwinkqubo. Ngethuba elifutshane, uza kugcina iziphumo zokuqala ngohlobo lwezithuba zokukhuthaza nokukhula kweendlela. Ngaphezu koko, unako ukwenza imali ngenani lomthengi wakho kwaye uthengise iintengiso kwiphepha lakho.
I-Backlink Booster iyisofthiwe esinobuchule eya kuba lula ukusebenzisa nabasebenzisi abangazi. Udinga nje ukufaka igama lakho lesizinda kwindawo. Emva koko, isofthiwe ihlalutya izikhundla zakho kwaye yenze i-backlinks kumthombo wakho wewebhu. Le software inokwakheka kwenkki yayo, yingakho unokugqiba ukuthembela kwi-booster backster kule nkqubo.
Ngaba awucingi ukuba yonke le ngcaciso iyandile ukuba iyinyaniso? Ewe, akukho nto into efana nesidlo sakusihlwa samahhala. Ukusuka kum namava am, ndithe ndathi ukudala iphrofayli yenkcazo esemgangathweni yinkqubo enzima kwaye ichitha ixesha elingenakwenziwa ngokukodwa. Ngaphezu koko, akufanele uncike ngokupheleleyo kwinkqubo. Kufuneka uhlolisise ikhonkco nganye ukuqinisekisa ukuba ifakwe kumthombo ochaphazelekayo ophezulu. Andiyibanga ukuba i-software yesixhobo sokwakha ibubi. Ngokuphambene noko, ndicinga ukuba iinkqubo ezinjalo ezizenzekelayo zinganceda kakhulu i-site yakho ye-SEO ukuba inikezela ngeenkonzo ezisemgangathweni kunye neenkonzo ezifanelekileyo. Ngokomzekelo, Semalt Auto SEO kwakhona isofthiwe esenzekelayo eyenza uluhlu lweenkonzo zokucwangcisa ezifana nophando lwamagama uphando, uhlalutyo lwewebhusayithi, uphando lwewebhsayithi, isakhiwo soqhagamshelwano kunye nesimo sokuhlaziya. Nangona kunjalo, xa kuthelekiswa ne-Backlink Booster, le nkampani inikezela abathengi ngokugcwele kwiinkcukacha zabo zangaphandle kwaye zibeka kuphela kwimithombo yewebhu efanelekileyo, ijikelezwe ngumxholo osisiseko esekelwe kuphando. Enye inzuzo ye-14 ye-Semalt Auto SEO kukuba banika inkxaso yabathengi. Ngoko ke, umsebenzi owenziweyo wokwenza umsebenzi owenziwe kwiwebhusayithi yakho uza kubonakaliswa kwingxelo Source .